Umnyango opeyintiweyo oyi-5 kunye neMibono yoyilo lweArchway - Ukuphefumlelwa Kombala
Umnyango opeyintiweyo oyi-5 kunye neMibono yoyilo lweArchway
Sibonile amagumbi avalwe ngombala, iindonga zezandi, nkqu nesilingi --kodwa eyona ndlela yokupeyinta besikhe sayiphinda kuba lula ukuyiphinda: Iminyango epeyintiweyo , iiarches, kunye neengqameko. Ziyindlela efanelekileyo yokuyila nabani na ofuna ukuzama Umbala ngaphandle kokugcwala isithuba ngendlela efanayo yokupenda igumbi lonke okanye nodonga olunamandla. Nokuba ku Umncinci okanye izithuba ezininzi, iingcango ezipeyintiweyo zongeza umahluko ngobuqhetseba kunye nombala wombala ngelixa uzimele okanye ugxininisa Iingubo zokwakha . Jonga imizekelo yethu esiyithandayo ngaphambili.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 Ukothuka okumangalisayo U-Emil Dervish
Apha, U-Emil Dervish uzilungiselele le ndledlana incinci ngokupeyinta i-archway umthunzi odlamkileyo weorenji. Nangona uthatha indawo encinci yokubonakalayo yokuthengisa izindlu nomhlaba, iyenza ipaseji inomdla ngakumbi kwaye ingabalulekanga. Ngaphezulu, kuzisa ukunyuka kobushushu kwimibala emnyama epeyintiweyo.
Mbini Isakhelo esitsha 2LG Studio
Njengoko besesitshilo, ukupeyinta isakhelo somnyango kukunyusa okuphantsi kodwa izinto zihlaziye ngokwaneleyo ukwenza umahluko, kwaye lo mzekelo uphefumlelweyo wentwasahlobo 2LG Studio iyasikhuthaza ukuba siyitshintshe ngamaxesha athile onyaka. Ukugcina izinto zinomdla, abayili bazoba isakhelo ngasinye ngombala owahlukileyo.
3 Umdibaniso weLuxe Uyilo lweKingston Lafferty
Kweli gumbi lokulala nge Uyilo lweKingston Lafferty , Iipasile zothando ziyazithambisa iipateni zejiyometri kunye nokuhonjiswa kwale mihla. Imiphetho ye-mamody yomnyango weglasi inceda ukutshintsha amagumbi akufutshane, kwaye ukuba ujonga kufutshane, uyabona ukuba i-archway iyakhanya ngegqabi legolide elityebileyo. Ndiyabulela kwiskimu sombala, le portal ilungele ubukhosi kodwa ayiziva ngathi iyaphazamiseka.
4 Isizathu esiShukumayo 2LG Studio
Nanku omnye umnyango wolonwabo owenziwe yi-2LG Studio. Endaweni yokupeyinta ngokulula umbala onwabisayo, yizise kwinqanaba elilandelayo ngemilo enomdla. Amagagasi amancinci enza eli gumbi lokudlela lidlalayo nangakumbi.
5 Isisombululo sokuYila Umdaka Bertram
Kwinto encinci engabonakaliyo, unokubumba okungeyonyani. 'Kwakungekho nto yokubumba isilingi kwaye kwakungekho nto yokubumba kwiingcango zale ndlu, ke ndiyongeza ngepeyinti,' utsho umhlobisi wangaphakathi Umdaka Bertram . Sebenzisa istensile okanye ubuncinci imephu uyikhuphe kuqala ukuba ufuna ukuphinda wenze le ngcamango yokuhombisa eludongeni.
UHadley Mendelsohn Umhleli oMkhulu UHadley Mendelsohn ngumhleli ophakamileyo weNdlu, kwaye xa engaxakekanga ethathela ingqalelo kuzo zonke izinto ezinxulumene nokuhonjiswa, unokumfumana ethengisa iivenkile zokuvuna, efunda, okanye ekhubeka kuba mhlawumbi waphulukana neiglasi zakhe kwakhona.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
amakhandlela kakubi kuwe
izimvo zomgodi womlilo wokuhlala ngaphandle
khloe kardashian ikhaya liyathengiswa